thinzar's blog: CGPA အပေါ် ဆရာများ၏ အမြင်
CGPA အပေါ် ဆရာများ၏ အမြင်
“Good programmers never do well in class.”
မနေ့က ဆရာတစ်ယောက် ပြောလိုက်တဲ့ စကား တစ်ခွန်းပေါ့။ ဒီလို စကားမျိုး ကြားပေါင်းလည်း များပြီ။ ကြားတိုင်းလည်း စိတ်ဆိုးရပေါင်း မနည်းတော့ဘူး။ တစ်ချို့ တစ်ဝက် ကိုတော့ လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စဉ်းစားလေ၊ အဲဒီ စကားရဲ့ အဓ္ဓိပါယ်က
“Those who did well in class can’t be considered as good programmers.” လို့ သက်ရောက်နေသလိုလိုဘဲ။ ပုံစံက ကျောင်းစာကို ပစ်ပြီး ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတာကို သွားလုပ်ရမယ့်ပုံ ဖြစ်နေပြီ။
နောက် ဆရာ တစ်ယောက် ရှိသေးတယ်။ သူအမြဲ ပြောတဲ့ စကားက CGPA 3.7 (in 4.0 scale) ကျော်တဲ့ ကျောင်းသားတွေဟာ employee ကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးတဲ့ (IT field မှာ)။ အရင်က သူ ကုမ္ပဏီတွေမှာ interviewer လုပ်တုန်းက CGPA 3.7 ထက်ကျော်တဲ့ သူတွေကို မခေါ်ဘူးတဲ့။ CGPA 3.0 နဲ့ 3.6 အတွင်းရတဲ့ သူတွေဟာ best candidate တွေဆိုဘဲ။ စိတ်လေတယ်။
အဲဒီလိုတွေ ပုံသေလာပြောနေလို့ နဂိုကမှ စာလုပ်ရမှာ ပျင်းရတဲ့ အထဲ ကြိုးစားချင်စိတ်ပါ ပျောက်သွားတယ်။ ဒုတိယ အမြင် နဲ့ စဉ်းစားကြည့်သေးတယ်။ ဒါဆိုရင် CGPA က ဘာကို indicate လုပ်တာလဲ??? ကြိုးစားမှုကိုလား တတ်မြောက်ခြင်းကိုလား။ ဟုတ်တော့ ဟုတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ ဘာသာရပ်တွေမှာ အမှတ်များများ ရသွားပေမယ့် တကယ် တတ်ချင်မှ တတ်သွားတယ်။ တစ်ချို့ ဘာသာရပ်တွေကြတော့လည်း အမှတ် နည်းနည်းဘဲ ရလိုက်ပေမယ့် ကိုယ့်အတွက် အရမ်း အကျိုးရှိသွား တာတွေလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နာရီ ၄ဝ လောက် အတန်းတက်ပြီး ၃နာရီ စာမေးပွဲ ထိုင်ဖြေလို့ ရလာတဲ့ အမှတ်တွေက အဲဒီလောက်ဘဲ အသုံးမဝင်ဘူးလား။ Bill Gates က university drop out ဆိုပေမယ့် Linus Torvalds နဲ့ Steve Jobs တို့ဟာ PhD holder တွေဆိုတာ ဆရာတွေ မေ့များနေသလား မသိပါဘူး။
စဉ်းစားစရာပဲဗျ. သူတို့ပြောချင်တာက တစ်စုံတစ်ရာကို Focus လုပ်စေချင်တယ်နဲ့တူပါတယ်. တစိုက်မတ်မတ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောနေမှာပေါ့. ဒါပေမယ့် မသဉ္ဇာပြောတာလည်း ဟုတ်သားပဲ. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ. စာတော့ မှန်မှန်ကျက်နော်. ကျန်တာတွေကို စဉ်းစားပြီး စိတ်လေခံမနေနဲ့. ဟဲဟဲ. ဆရာလုပ်ရတာလည်း ကျေနပ်သွားပြီ. ပြန်ပြီဗျာ...
20/4/07 4:24 PM
Myo Kyaw Htun said...
စာလည်းတော် ပရိုဂရမ်းမင်းလည်း တော်တဲ့သူတွေ အများကြီးပဲ။
စာလည်းမတော် ပရိုဂရမ်းမင်းလိုင်းထဲ ဝင်တော့လဲ ယောင်ချာချာတွေ ဖြစ်နေတာလဲ အများကြီးပဲ ။
ဖြစ်နိုင်ရင် တစ်လိုင်း နှစ်လိုင်းထက် မပိုစေချင်ဘူး။ ကျော်ပြီး လိုင်းများသွားရင်တော့ မကောင်းတော့ဘူး။ ဟိုနားသိသလိုလို ဒီနားသိသလိုလို နဲ့ တကယ် နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်မေးလာရင် မသိတော့ဘူး။
အကုန်သိ အကုန်တတ် လူတွေ တွေ့နေတော့လည်း အားကျမိပြီး သူတို့လို ဖြစ်ချင်နေပြန်ရော။ ပုံမှန်မရှိပါဘူးဗျာ။
20/4/07 4:46 PM
ဆရာရန်>> ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာ။ :D
ကိုမျိုးကျော်ထွန်း>> အင်း.. တစ်လိုင်း နှစ်လိုင်း လိုက်နို်င်ရင်တော့လည်း ဟုတ်တယ်။ IT ကလည်း လိုင်းပူးနေတာများတော့ ခပ်ကြောင်ကြောင် ဖြစ်ချင်လာပြီ။
21/4/07 1:27 AM
ဒဲဒီ့ဆရာက Billgate ကိုသဘောကျပုံပဲ..
21/4/07 11:40 AM
Linus Torvalds က company တောင်မထောင်ရသေးဘူးနဲ့တူတယ်...
အခုထက်ထိ Linux နောက်ပိုင်းဘာမှ ထွေထွေထူးထူးမထွက်လာဘူး...
company တစ်ခုမှာ open source ပိုင်းမှာ အလုပ်လုပ်နေတယ်လို့ကြားတယ်...
မိသားစုအတွက် အချိန်ပိုရအောင်လို့တော့ ပြောတာပဲ...
Steve Jobs က apple ကနေ တစ်ခေါက်ထွက်ခဲ့ရဘူးတယ်...
နောက်မှ သူပြန်ရောက်ချိန်မှ ipod ထွက်လာတာ...
သူ့ရဲ့ iphone က လည်း သူများနာမည်ကူးချလို့ တရားစွဲခံထိသေးတယ်...
Bill Gate ကတော့ ကမာ္ဘမှာ အချမ်းသာဆုံးပဲ...
Microsoft က ကူးချပြုပြင်နဲ့ နေရာမှတော့ ထိပ်ပဲ..
အခုထက်ထိ windows က ကြီးစိုးထားဆဲပဲ...
Office 12 ကတော့ menu style က ကူးချလို့တရားစွဲခံထိသေးတယ်..
22/4/07 1:14 AM
ခေတ်ကြီးက Generalization ကို ပိုအားပေးလာ သတဲ့။ ဟုတ်လားတော့ မသိဘူး။
24/4/07 8:35 PM
It doesn't necessarily mean that those who did well in class will never be good programmers.
25/4/07 11:52 AM
kosanoo>> မသိတော့ပါဘူး။ သူက ဘာပြောချင်မှန်းလဲ မသိ။ ပုံစံကြည့် ရတာတော့ အတန်းထဲမျာ စာမလုပ်တဲ့ သူတွေကို ပို အထင်ကြီးသလား မသိဘဲ..
saturngod>> ဒါပေမယ့် Linus Torvalds ကို open source သမားတွေက အရမ်း လေးစားကြတယ်.. Steve Jobs ရဲ့ idea တွေကလည်း အမိုက်စားတွေဘဲ။ ဒီတော့ ကျောင်းပညာ အရေးမကြီးဘူးလို့ တော့ ငြင်းလို့ မရဘူးလို့ ထင်တာဘဲ
mgthantzin>> အဲဒီ generalization ဆိုတာကို မကြိုက်တာ။ နောက် ရှိသေးတယ်.. အိုင်တီသမားတွေက မိန်းကလေးတွေကိုဆိုရင် အရမ်း အထင်သေးတာဘဲ.. အားပေးမယ်ဆိုတာ မရှိကြဘူး
anonymous>> yeah.. it's true. but, the lecturers just like to generalize the case (and alsoafew employers out there).. saying --> "real keen students are usually busy exploring their interests so that they don't hv time to study."
25/4/07 12:30 PM
Wai Yan said...
အဲဒီဆရာက ကျွန်တော့်လို လူမျိုးလေးတွေကိုပြောတာထင်တယ်။ ဟီးဟီး။ ကျွန်တော်ဆိုကျောင်းစာမှာ သိပ်အမှတ်ကောင်းကောင်းမရဘူး။ အပြင်မှာဆိုရင်လား။ မသိဘူး။
28/4/07 1:53 PM
ကိုဝေယံ>> အပြင်မှာ အရမ်းတော်ရင် တော်နေမှာပေါ့။ နောက်သိသွားရင် ပြောပြနော်။
30/4/07 9:50 PM
ကျမအတွက် မရှိမဖြစ် freeware များ
How to open *.docx, *.xlsx, *.pptx files without Microsoft Office 2007
Installation ceremony for 13th king
Tagged game pool ထဲ ပါခဲ့ရပြန်တယ်
Trainee ကျောင်းသူ တစ်ယောက်ဧ။် နေ့စွဲများ
blog post လုပ်ခြင်း
စာရွက် တစ်ပိုင်းက ပေးခဲ့သော သင်ခန်းစာ
နည်းပညာခေတ်တွင် လူ့ဘဝဧ။် အစွန်းရောက်မှ ုများ
တွေ ့ရကြုံရ (၂)